Video:-Madaxweynaha Galmudug & Taliyaha Xoogga oo furay wadooyin ku xirmay dagaaladii Gaalkacyo | warsanradio baydhabo
Home WARARKA MAANTA	Video:-Madaxweynaha Galmudug & Taliyaha Xoogga oo furay wadooyin ku xirmay dagaaladii Gaalkacyo
written by warsan radio 16/12/2017
Madaxweynaha Galmudug iyo Taliyaha Ciidanka Xoogga dalka Somaliya iyo masuuliyiin ka tirsan Maamulka Puntland, ayaa ku guuleystay in la furo wadooyinkii ku xirmay dagaaladii ka dhacay Magaalada Gaalkacyo ee xarunta Gobolka Mudug.
Wixi ka dambeeyay dagaaladii cuslaa ee ka dhacay Magaalada Gaalkacyo waxaa jiray wadooyin badan oo dagaalada ku xirmay, islamarkaana aysan jirin cid marto.
Madaxweynaha Galmudug iyo Taliyaha Ciidanka Xoogga dalka Somaliya C/wali Jaamac Gorod, ayaa ku guuleystay furitaanka wadooyinkaasi, kadib markii shalay kulan ay la qaateen Odayaasha Dhaqanka iyo masuuliyiin ka soo jeeda deeganada Puntland.
Kulankii shalay oo lagu go’aamiyay in wadooyinka dib loo furo, ayaa saaka aroortii waxaa wadada dheer ee dagaalka uu ku xirmay ku kalahay Madaxweynaha Galmudug iyo Taliyaha Ciidanka Xoogga dalka oo halkaasi furay.
Odayaasha Dhaqanka Magaalada Gaalkacyo ayaa soo dhaweeyay dadaalada nabadeed ee Madaxweynaha Galmudug Axmed Ducaalle Geelle (Xaaf) uu ka wado Magaaladaasi.
Taliyaha Ciidamada Xoogga dalka Somaliya C/wali Jaamac (Gorod) ayaa sheegay in lagama maarmaan ay tahay si dhab ah in looga shaqeeyo ammaanka Magaalada Gaalkacyo.
Gaalkacyo oo laba maamul ay ka dhisan tahay, ayaa xilliyada qaar waxaa ku dagaalama maleeshiyaado ka soo kala jeeda Puntland iyo Galmudug, dagaaladaasi oo saameyn ku yeesha Bulshada Gobolka.
Video:-Madaxweynaha Galmudug & Taliyaha Xoogga oo furay wadooyin ku xirmay dagaaladii Gaalkacyo was last modified: December 16th, 2017 by warsan radio